खुट्टाको पाइताला चिसो र नङ पहेँलो हुन्छ ? यी ६ लक्षण हुनसक्छन् बिरामीको सङ्केत ! | सुदुरपश्चिम खबर
खुट्टाको पाइताला चिसो र नङ पहेँलो हुन्छ ? यी ६ लक्षण हुनसक्छन् बिरामीको सङ्केत !
यो पनि पढ्नुहोस् ःके तपाईंको औंला पड्काउने बानी छ ? यसो भन्छन् वैज्ञानिक !!ःऔंला पड्काउँदा आवाज आउँछ नि । कहिल्यै याद गर्नुभएको छ किन आवाज आउँछ भनेर ? अनि यसो गर्नु खतरनाक हो कि होइन ?एउटा कुरा सुनिश्चित छ । औंला पड्काउँदा बाथरोग लाग्दैन । कसैले लाग्छ भन्यो भने त्यो झुटो हो ।
एमाआरआई गरेर अनुसन्धानकर्ताहरूको टोलीले यो कुरा पत्ता लगाएको हो । एकजना मान्छेलाई औंला पड्काउन लगाएर वैज्ञानिकहरूको यो पत्ता लगाएका थिए ।यसरी आवाजको स्रोत पत्ता लगाएपछि वैज्ञानिकहरूले यसो गर्नु हानिकारक हो कि सुरक्षित पनि पत्ता लगाउन सक्ने आशा गरेका छन्